Umthelela Wokumaketha Wenkampani Yokuqala uma uqhathanisa Nemininingwane Yenkampani Eseceleni | Martech Zone
Yize ukuthembela komlando okuqhutshwa idatha kubathengi idatha yomuntu wesithathu, ucwaningo olusha olukhishwe yi-Econsultancy and Signal luveza ukuguquka komkhakha. Ucwaningo luthole ukuthi ama-81% wabakhangisi ababika ukuthi bathola i- i-ROI ephezulu kakhulu kusuka ezinhlelweni zabo eziqhutshwa yidatha lapho usebenzisa idatha yeqembu lokuqala (uma kuqhathaniswa no-71% ​​wontanga yabo kokujwayelekile) ngama-61% kuphela acaphuna idatha yomuntu wesithathu. Lokhu kuguquka kulindeleke ukuthi kujule, kanti ama-82% wabo bonke abathengisi abahloliwe behlela ukwandisa ukusetshenziswa kwabo kwedatha yenkampani yokuqala (i-0% ibika ukwehla), kuyilapho abathengisi abangu-1 kwabane behlela ukunciphisa ukusetshenziswa kwabo kwemininingwane yomuntu wesithathu.
Uyini Umehluko Phakathi Kwedatha Yenkampani Yokuqala Nenkampani Eseceleni
Idatha yenkampani yokuqala iyaqoqwa futhi iphethwe yinhlangano yakho. Kungaba idatha yobunikazi efana nemiphumela yocwaningo lwamakhasimende kanye nemininingwane yokuthenga. Idatha yomuntu wesithathu iqoqwa enye inhlangano futhi kungenzeka ithengwe yonke, ifakwe idatha yakho yamakhasimende yamanje, noma itholakale ngezinhlelo zokusebenza zezinkampani zangaphandle. Izinkinga zivame ukuvela ngokunemba kanye nokugcina isikhathi kwedatha yomuntu wesithathu.
Idatha evela eceleni ingeyinye inketho kepha ayisetshenziswa izinkampani. Imininingwane evela eceleni iqoqwa ngokubambisana kwezinkampani. Ngokwabelana nezethameli, amazinga okuphendula angaphakama kakhulu, idatha yamakhasimende ingahle icebe kakhulu, futhi imininingwane isalungile futhi inesikhathi. Uma ulwela ukuthola imininingwane eminingi kumakhasimende akho, ungahle ubheke ukusebenzisana nenkampani eyabelana ngamakhasimende akho!
Sekuyiminyaka, idatha yomuntu wesithathu ibiyisisekelo sokumaketha kwedijithali, kepha izinkampani ezisebenza kahle kakhulu namuhla ziya ngokuya zibheka ngaphakathi, kumininingwane yazo yeqembu lokuqala. Okuhlangenwe nakho okungcono kwamakhasimende kudinga idatha engcono. Amabhrendi kufanele aqonde ukuhlangana kwabantu nezindlela zamaphethini neziteshi zabo nendima yabo ohambweni lwamakhasimende-lokho amakhasimende akufunayo nokuthi akufuna nini. Kuzo zonke izimo, idatha yenkampani yokuqala evela kumakhasimende wangempela izoba usizo kakhulu.
Imiphumela yocwaningo isuselwe kubakhangisi abangama-302 futhi yenziwa ngoMeyi 2015 ngu Econsultancy futhi Isignali.
Imininingwane Eyinhloko Oyothola Kulombiko
Yiziphi izinzuzo zokuncintisana zezinkampani ezinekhono ekusebenziseni idatha yazo?
Abadlali abaphezulu baqoqa kuphi idatha yabo yenkampani yokuqala futhi lokho kwehluke kanjani kokujwayelekile?
Yiziphi izinyathelo zokuqala zezinhlangano ezizama ukusebenzisa kangcono idatha yazo yeqembu lokuqala?
Yiziphi izinhlobo zedatha ethile ezilinganiswe kakhulu ngokunemba nokuba lusizo?
Tags: idatha yekhasimendeidatha yamakhasimende roiikhasimende intelligenceukunemba kwedathaidatha roiukucubungulaidatha yephathi yokuqalaidatha yomuntu wesibiliisignaliidatha yomuntu wesithathu
Ama-Big Brands anenkinga, iPear Inesixazululo